01 थप १०९६ जनामा कोरोना संक्रमण, १२ जनाको मृत्यु
02 बाढी प्रभावितलाई राहत र उद्धारको व्यवस्था गर्न गृहमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
03 १०० अंकले घट्यो सेयर बजार
04 सुदूरपश्चिमस् पहिरोमा परी ३ को मृत्यु, २ घाइते
05 मेस्सीलाई उछिन्दै अन्सु फातीले बनाए यस्तो रेकर्ड
06 उत्तर कोरियाद्वारा जापानको समुद्री क्षेत्रमा ‘सबमरिन–लञ्चड् ब्यालेस्टिक मिसाइल’ प्रहार
07 किसानको धान डुब्यो (तस्बिरहरु)
08 प्रतिकुल मौसमका कारण हवाई उडान प्रभावित
09 महाकालीमा फसेकाको उद्धार गर्न हेलिकप्टर मगाइयो
सुदूरपश्चिमस् पहिरोमा परी ३ को मृत्यु, २ घाइते
१ आश्विन २०७८, शुक्रबार ०८:०१
१ असोज, २०७८ काठमाडौँ : सरकारले आज (शुक्रबार) देखि देशका विभिन्न स्थानमा दशैं/तिहार लक्षित सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमार्फत सरकारले देशका ८५ स्थानमा पसल सञ्चालनमा ल्याएको हो ।सहुलियत पसलमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु बिक्रीमा राखिन्छ । ती पसलमा दाल, चामल, चिनी, नून र खानेतेल लगायतका वस्तु बिक्रीमा राखिने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयकी उपसचिव उर्मिला केसीले विगत वर्षमा जस्तै यो वर्ष पनि सहुलियत पसल सञ्चालन गर्न लागेको बताइन् । उनले दशैँ देखि छठसम्मको अवधिमा उपत्यकासहित देशभर सहुलियत पसल सञ्चालन हुने बताइन् । दशैं/तिहारलाई लक्षित गर्दै व्यापार कम्पनीले देशभरका ४३ स्थानमा, कर्पोरेशनले ३२ र राष्ट्रिय दुग्ध विकास संस्थानले १० स्थानमा सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याउने भएका हुन् । व्यापार कम्पनी, कर्पोरेशन र दुग्ध विकास संस्थानले उपत्यकामा पनि सहुलियत पसल सञ्चालन गर्नेछन् ।
आजदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको सहुलियत पसल कात्तिक २४ गतेसम्म चल्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बताएको छ । यस बीचमा व्यापार कम्पनी र कर्पोरेशनले घुम्ती पसल समेत सञ्चालनमा ल्याउनेछन् ।
व्यापार कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपाने सुवेदीले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका ३७ जिल्लाबाट दशैं/तिहार लक्षित व्यापार गर्ने बताइन् । यस्तै, उनले चाडपर्व आउँदै गर्दा खाद्यान्नको मूल्यमा अचाक्ली वृद्धि रोक्न सरकारी कम्पनीमार्फत व्यापार गर्न लागिएको प्रष्ट पारिन् । उनले भनिन्, ‘सहुलियतमा सामान बिक्री गर्दा बजारमा व्यापारीको मनोमानीमा हस्तक्षेप गर्न सहयोग पुग्छ । जसले मूल्यवृद्धि रोक्न सघाउसमेत पुग्छ ।’
यस्तै, कर्पोरेशनका निर्देशक कुमार राजभण्डारीले दशैं/तिहारमा उपभोक्तालाई सस्तोमा सामान बिक्री गर्ने लक्ष्यसहित सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याउन लागेको बताए । उनले ती पसलले धेरै उपभोक्तालाई नसमेटेपनि बजार मूल्यमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने जानकारी दिए ।
व्यापार कम्पनीले उपत्यकाका रामशाहपथ, टेकु, नख्खु, सूर्यविनायक, कलंकी, थापाथली, बनेपा र कोटेश्वर लगायतका स्थानमा सहुलियत पसल सञ्चालन गर्दै छ । यस्तै, कर्पोरेशनले कालीमाटी (२), कोटेश्वर, सतुङ्गल, जावलाखेल र भक्तपुर लगायतका स्थानमा सहुलियत र घुम्ती पसल सञ्चालन गर्ने बताएको छ ।
यसबाहेक राष्ट्रिय दुग्ध विकास संस्थानले आफ्ना उत्पादन व्यापार कम्पनी र कर्पोरेशनमार्फत बिक्री गर्ने र आफ्नै कार्यलयमार्फत समेत बिक्री गर्ने महानिर्देशक रुद्रप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । संस्थानले काठमाडौं उपत्यकामा तीन स्थान र उपत्यका बाहिरका ७ स्थानबाट आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्ने महानिर्देशक पौडेलले बताए ।
कुन सामानमा कति छुट ?
सरकारले सञ्चालनमा ल्याउने सहुलियत पसलमा दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यमा छुट दिइन्छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतका संघ संस्था र पदाधिकारीबीच बसेको बैठकले दशैंमा छुटसहित अत्यावश्यक वस्तुको बिक्री वितरण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सोहीअनुसार, व्यापार कम्पनी र कर्पोरशेनमार्फत मन्त्रालयले तोकेको छुट मूल्यसहित सामान बिक्री गर्ने बताइएको छ । यसका लागि व्यापार कम्पनी र कर्पोरेशनले आवश्यक तयारी समेत थालिसकेका छन् । कर्पोरेशनले नून प्रतिकिलो १८ र चिनी प्रतिकिलो ७९ रुपैयाँमा बिक्री गर्ने राजभण्डारीले जानकारी दिए ।
केमा कति छुट ?
वस्तु छुट मूल्य (प्रतिकेजी-लिटर)
नून – २ रुपैयाँ
दाल – ५ रुपैयाँ
चिउरा – ५ रुपैयाँ
आटा – ५ रुपैयाँ
तेल (तोरी) – ५ रुपैयाँ
तेल (सूर्यमुखी) – ५ रुपैयाँ
चिनी – ५ रुपैयाँ
चामल – ५ रुपैयाँ
खासी/बोका (जिउँदो) – १० रुपैयाँ
सिमी – १० रुपैयाँ
फापर – १० रुपैयाँ
तेल (भटमास) – १० रुपैयाँ